SpongeBob Battle ho an'ny Bikini Bottom Apk maimaim-poana ho an'ny Android
Ianao ve no mpankafy SpongeBob lehibe indrindra? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana tsara indrindra ho anao, izay fantatra amin'ny hoe SpongeBob Battle For Bikini Bottom Apk. Ity no lalao Android farany novolavolaina ho an'ireo mpankafy ny SquarePants hilalao sy hamonjy ny bikini ambany avy ao amin'ny Plankton ratsy fanahy.
Raha mpitia sarimiaina na sariitatra ianao dia ho fantatrao daholo ny momba ny seho fahitalavitra SpongeBob tsara indrindra. Navoaka tamin'ny faramparan'ny taona 80 izy io ary mbola misy mpankafy eran'izao tontolo izao, izay tia mijery ny toetran'ny ranomasina ankafiziny manao traikefa samy hafa amin'ny namany.
Inona ny SpongeBob Battle For Bikini Bottom Apk?
SpongeBob Battle For Bikini Bottom Apk dia rindranasa filalaovana Android, izay manolotra ny mpilalao hilalao ho toy ny mpilalao spaoro tiany na namana hafa hamonjy ny bikini ambany amin'ny ratsy. Ity no lalao mampientanentana indrindra ho an'ny mpankafy milalao sy mankafy.
Raha mpankafy an'ity fandaharana Tv ity ianao dia ho fantatrao ny momba izany. Fa raha vao sambany no nahafantaranao an'io, dia tokony hijery ny andian-tsarimihetsika tsara indrindra amin'ny fahitalavitra ianao. Izy manontolo Lalao 3D dia mifandray amin'ny andian-dahatsoratra, izay midika fa ny mpankafy dia hahatakatra mora foana ny gameplay.
Noho izany, misy mpilalao efatra lehibe ao amin'ny lalao, izay hita ao amin'ny fahitalavitra ihany koa. Noho izany, ny voalohany sy ny mpilalao fototra dia SpongeBob, izay sponjy ranomasina mavo. Miasa ao amin'ny trano fisakafoanana haingana antsoina hoe Krusty Krab ilay toetra.
Ny toetra faharoa dia i Patrick Star, izay namana tsara indrindra amin'ny mpilalao fototra ary tia miala voly amin'ny fotoana rehetra. Patrick dia kintana nefa mitovitovy amin'ny olombelona. Ny toetra fahatelo dia orita, izay mpitatitra ao amin'ny Krusty Krab. Ny tompon'ny trano fisakafoanana dia Mr.Karb, izay matetika sahirana noho ny Plankton.
Noho izany, manana ny mpilalao fototra rehetra isika, izay ho hita amin'ity lalao ity. Noho izany, dia hieritreritra, inona no ho gameplay. Noho izany, tena mahaliana ny mpankafy. Hampiasa ny toetra tsara rehetra misy ianao ary handresy ny Plankton ratsy sy ny robots.
Ny endri-tsoratra rehetra dia manana hery samihafa, izay ilainao hifehezana sy hampiasaina hanoherana ny ratsy. Noho izany, azonao atao ny mikaroka ny sasany amin'ireo aventure tsara indrindra sy mahavariana indrindra amin'ity lalao ity ary mankafy azy ireo be dia be. Tsy maintsy mamita iraka samihafa ianao, izay ahitana ireo lehiben'ny ratsy fanahy.
Ny iraka tsirairay dia misy misiôna kely sy valisoa samihafa. Noho izany, misy endri-javatra mahavariana taonina misy ao, izay azonao zahana. Makà SpongeBob Battle For Bikini Bottom For Android ary manomboka milalao azy amin'ny findainao na Tablet.
Raha tianao ny lalao milalao andraikitra, dia ho liana amin'izany ianao Ragnarok Origin Apk. Io no iray amin'ireo lalao aventure tsara indrindra sy lalao milalao an-tsehatra, izay azonao atao koa amin'ny fitaovana Android-nao. Noho izany, tadiavo ny lalao misy amin'ity tranokala ity.
anarana SpongeBob SquarePants
Anaran'ny fonosana com.hg.bfbb
Ahoana ny fampidinana ny lalao?
SpongeBob Battle For Bikini Bottom Download misy eto amin'ity pejy ity. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay misy eo ambony sy ambany. Izahay dia mizara Apk sy OBB, izay tsy maintsy ampidininao sy apetrakao. Raha vantany vao napetrakao amin'ny fitaovanao izany dia milalao ary mankafiza.
Raiso ny endri-tsoratra Bikini rehetra ambany
Karazan'olona samy hafa manana fahaiza-manao samihafa
Aringano i Plankton sy ny Robots
Lalao Adventures indrindra
3D Visual miaraka amin'ny sary lehibe
Raha te ho anisan'ny Bikini Bottom ianao dia mila mahazo SpongeBob Battle For Bikini Bottom Apk ary mankafy. Hanana traikefa mahagaga tsara indrindra amin'ity fampiharana ity ianao ary hankafy izany. Raha manana olana amin'ny fampidinana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Sokajy Games Tags SpongeBob Battle Fa Bikini Ambany apk, SpongeBob Dailymotion vide Download, SpongeBob Battle ho an'ny bikini ambany ho an'ny Android Post Fikarohana
AA Phenotype Patcher Apk Download Ho an'ny Android 